Tababar ku saabsan Nidaamka Hantidhawrka oo loo soo xidhay 50 xirfadlayaal Hantidhawre. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Arbaco Feb-26,2014:-Tababarkan oo uu soo diyaariyay xafiiska hantidhawrka guud ee DDSI islamarkaana loo qabtay shaqaalaha xafiiska gaar ahaan xirfadlayaasha karaaniyada hantidhawrka ayaa waxa intii uu socday siwayn loogu gorfaynayay nidaamka loo hantidhawro mashaariicaha dhismayaasha,Nidaamka dhawrida iibka hantida (procurement audit),Qulqulka Miisaaniyada iyo habraacyada iyo waliba kor uqaadida Xirfada iyo Tabaha Aqooneed ee Hanti-dhawrada Deegaanka.
Tababarkan oo socday muddo 7 maalmood ah ayaa waxaa xidhitaankiisii ka hadlay agaasinka guud ee xafiiska hantidhawra DDSI mudane Maxamed Cabdi Muxumed isaga oo sheegay ahmiyada uu leeyahay tababarkaasi, wuxuuna ka waramay istalatajiyadaha iyo qorshayaasha horumarineed ee u yaala xafiiska hantidhawrka guud ee DDSI. Isaga oo agaasinku si qoto dheer ugu booriyay ka qayb galayaashii tababarkaa in ay sidii loogu talagalay u fuliyaan xirfadan aqooneed ee ay barteen mudadii uu tababarku socday, islamarkaana kaalintooda ka qaadaan hirgalinta horumarka xawliga ah ee ay xukuumada deegaanku ku talaabsatay sidoo kalena ay adkeeyaan ilaalinta iyo dhawrida hantida dawlada.
Tababarkan ayaa ay cashiradiisa tabinayeen khabiiro ka socday Xafiiska Hantidhawrka Guud ee heer fedaraal iyadoona uu wariyaha CN uu waxka waydiinay qaarka mid ah xirfadlayaasha hantidhawrka waxay ka faa-iidaysteen tababarkaa mudadii uu socday iyaga oo noo sheegay in ay siwayn uga heleen xirfad aqooneed oo ku qotonta nidaamka dhawrida hantida noocyadeeda kala duwan. waxayna balan qaadeen in ay sidii loogu talagalay ugu shaqayn-doonaan aqoonta ay ka koradhsadeen mudadii uu socday tababarkani.
Ugu danbayntii ayaa waxaa la gudoonsiiyay xirfadlayashii hantidhawrka shahaadooyinka tursimaya aqoonta ay xirfada aqooneed ee ay ka barteen mudadii uu socday tababarku. maaha markii ugu horaysay ee ay tababar noocan oo kali ah qabtan xafiiska hanti dhawrka guud ee DDSI ee waxaa jiray tababaro ka horeeyay oo kor loogu qaadayo xirfada aqooneed ee hantidhawrayaasha deegaanka